စိန့်ဂျူလီဘီလီယား (ကညာစင်)St. Julie Billiart (Virgin), (1751 – 1818) | Radio Veritas Asia
စိန့်ဂျူလီဘီလီယား (ကညာစင်)St. Julie Billiart (Virgin), (1751 – 1818)
ဂျူလီသည် ပြင်သစ်ပြည် အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ Picardy မှာ နေထိုင်သော ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်စုမှ မွေးဖွားသည်။ မိဘများသည် တောင်သူလယ်သမားများ ဖြစ်ကြသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝကစပြီး ဝိညာဉ်ရေး၌ စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်သည်။ အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ်၌ သန့်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းအတွက် ဂတိသစ္စာဆိုခဲ့သည်။ မကြာခင် (၂)နှစ်အတွင်းမှာ ဖခင်သည် လယ်များမရှိတော့ဘဲ မိသားစုပြဿနာနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ ဂျူလီသည် စာရင်းငှါးလုပ်ရတော့သည်။ သူမအား ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော်သည် ထင်ရှားလေ့ရှိသည်။ ၁၇၇၀-ခုနှစ်၌ ကိုယ်တော်မြတ်အား နေ့တိုင်းပင့်ယူရန် အခွင့်ရခဲ့သည်။
ဘေးဒုက္ခကပ်ကြီး ကျရောက်လာသည်။ သူမအသက်(၂၃)နှစ်အရွယ်မှာ ပါရာလိုက်ရောဂါသည် ဖြစ်လာသည်။ အကူညီမဲ့ဘဝ၌ အသက်(၃၀)အထိ နေရသည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းသည် သူမဘဝ၌ မကုန်ဆုံးနိုင်ပါ။ ၁၇၈၉-၉၅ အတွင်း ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကြီးမှာ သေဘေးမှ သိသိသာသာ လွတ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်မြတ်ပင့်ယူခြင်းသာ သူမအတွက် ရှိတော့သည်။ ရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးများ လာသောအချိန်လောက်ပဲ ကိုယ်တော်မြတ်ရနိုင်သည်။ အိမ်မှာနေရင်း မေတ္တာကရုဏာလုပ်ငန်းအား လုပ်ဆောင်သည်။ တတ်နိုင်သလောက် ပညာရေးအား မိဘမဲ့အတွက် ဘုရားတရားကြည်ညိုသူမှတဆင့် လုပ်ဆောင်သည်။
၁၈၀၃-ခုနှစ် ဩဂုတ်လ၌ စိန့်ဂျူလီသည် သူမ၏ “Institute of the Notre Dame” ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ မသန်မစွမ်းသူ ဂျူလီသည် သူမ၏နောက်လိုက် (၅၃)ယောက်နှင့်အတူ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက ယေဇူး၏ရွှေနှလုံးအား သဒ္ဒါကြည်ညိုချစ်ခြင်းမေတ္တာတဆင့် ပိုထားပါဟု အကြံပေးသည်။ မကြာခင် ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်အား သဒ္ဒါကြည်ညိုချစ်ခြင်းကျွတ်လွတ်ပြီး လူကောင်းပကတိ ဖြစ်လာသည်။ နောက်ထပ် (၁၂)နှစ် ဘဝတစ်လျောက် ဘုရားအတွက် လုပ်ဆောင်သည်။
ပြင်သစ်ပြည်၊ ဘဲလ်ဂျီယံပြည်၌ ကွန်ဗင့်ကျောင်း (၁၀)ကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။ သူမ၏ကွန်ဗင့်အတွက် အနစ်နာခံလေ့ရှိသည်။ တစ်နေ့ခြေလျင်ဖြင့် (၂၈)မိုင် လမ်းလျှောက်လေ့ရှိသည်။ ဘုရားအတွက်လုပ်ငန်း၌ သူမသည် ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းခြင်းအား အမှုမထားခဲ့ပါ။
သူမသေဆုံးပြီး ကျန်ရစ်သော သူ့မစစ္စတာရ်များက ပညာရေး၌ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်ကြရာ ကမ္ဘာအနှံ့ကျော်ကြားလာသည်။
Fr. ဒေါမိနစ်ကုန်ကုန် (ဘာသာပြန်)
St. Mary Bernard Soubirous (Virgin), စိန့်မေရီဘဲနဒ်စိုဘရာစ် (ကညာစင်) (1844-1879)
St. Benedict Joseph Labre, စိန့်ဘေနေဒစ် ဂျိုးဇက် လာဘရီ (15 April )
Sts. Tiburtius, Maximus and Valerian (Martyrs), စိန့်တီဘုတီအုစ်၊ မက်ဆီမူးစ်နှင့် ဗာလေးရီယန် (ဓမ္မအာဇာနည်များ)
St. Martin (I), စိန့်မာတင်း (၁)